မသာ ခွေးဝန်ကြီး ~ SAI SENG SERK
Home » POLITICALSCIENCE » မသာ ခွေးဝန်ကြီး
တစ်နေ.ပြီးတစ်နေ. ဗမာအစိုးရ ၀န်ကြီးသမားတွေက ပြည်သူ.အတွက် နိုင်ငံအ တွက်က ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး မြန်မာပြည်က အလှတရားတွေကို ဖျက်စီးဖို.ပဲသိတယ်။အခုလဲလာပြန်ပြီ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီး မသာ ဦးမော်သာထွေး ခေါ် မော်သာခွေး ကသံလွင်မြစ်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ဖို. အရမ်းကြိုးစားလာခဲ.တယ်။မ ဖြစ် ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်. သဘောတော.ရှိတယ်။ ခွေးမျိုးတွေ အားလုံး ခွေးလောက် တန်ဖိုးမရှိဘူး မသာ ၀န်ကြီးတွေ ရေဘေး ဆိုးကြိုးဖြစ်လာ ရင်သူတို. ခံစားရမှာ မှမပာုတ်တာ အဲမှာနေကြတဲ. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပဲ။ တာချီလိတ်မှာ ရေကြီးတာ ရှမ်းအရှေ.ပိုင်းမှာ အရမ်းဒုကရောက်နေတဲ.အချိန်မှာ မင်းတို.မို.လို. သံလွင်မြစ်ကို တားပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဆောက်ဖို.လုပ်သေးတယ်။ခွေးမသာ ၀န်ကြီးတွေ ၀န်ကြီးလခ တစ်လကို ငါးသိန်း ဆယ်.ငါးသိန်း ရတာမလောက်ဘူးလားမသိဘူး။ မြစ်တွေ. ဗမာရောက် တောင်တွေ တရုတ်ရောက် ဆို
တဲ.စကားနဲ. တော်တော်တူလာပြီ။လက်ရှိ ဗမာအစိုးရ President ခေတ်မှပဲ လူတွေ ပြည်သူလူထုတွေ တော်တော် ဒုက ရောက်ကြပြီ။ရေအား လျှပ်စစ်ဆောက်မယ်.ပိုက်ဆံကို တာချိလိတ်မှာ ဖြစ်နေတဲ. ရေဘေး ဒုကသည် သမားတွေကို ကူညီလိုက်ပါ။အကြိုးရှိ သေးတယ်။တစ်နှစ်တစ်နှစ် အစိုးရ၀င်ငွေတွေ မနည်းဘူး။အဲဒါတောင် နိုင် ငံခြားငွေတွေကိုတောင်ချီးငှားပြီး ဒေါ်လာ ဘီလီယံ တောင်ရှိနေပြီ အဲငွေတွေ
ရောဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ ပြည်သူလူထု ကြတော. တစ်နေ. စာ ထမင်းလျှော. စားခိုင်း ပြီး မင်းတို.ကြတော. လွတ်တော်ထဲမှာထိုင်ပြီး မိုးရွာမသိ လေတိုက်မသိ ရေကြီး မသိ အေးဆေးပဲ Special တောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်။အိမ်ကမိန်းမကို အီပြီဆိုပြီး ပာိုတယ်တွေမှာ ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ချောချောနဲ.သွားအိပ်တာ လေးစားစ ရာကြီး တို. ဗမာပြည်၏ ၀န်ြကီးနှင်. လူကြီးများ။ပြည်သူထမင်းစားပြီး ပြည်သူအပေါ်ကောင်းကြိုးမလုပ်တဲ. မသာကောင်တွေကများ။ခွေးတောင်မှ သူတို.အပေါ်ကျွေးမွေး ရှောက်စောင်. ရင်တောင်မှသူ.ပိုင်ရှင် ကိုတောင် Protect ပြန်လုပ်
ပေးတယ် မင်းတို.ကြတော. ပြည်သူအတွက်ဘာလုပ်ပေးခဲ.သလဲ။ယခု ၀န်ကြီး
သမားတွေ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးတို. ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတို. နယ်စပ်ဝန်ကြီး ဘနရေးဝန်ကြီး ဦးခင် အောင်မြင်. အပါအ၀င်ကြည်.လို.ကိုမရတာစောက်ခွက်ကိုတောင်မမြင်ချင်ဘူး။သူတို.မျက်နှာတွေကို ခွေးသေးတောင်မပန်း
ချင်ဘူး။ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်လာခဲ.တဲ. နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ပာာ လုံးဝကို မကောင်းခဲ.တာ။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြတော.သတ်ဖြတ် မိန်းခလေးဆိုရင်စော် ကား။မသာ ခွေးဝန်ကြီးတွေ။(ကျွန်တော်ပိုစ် ရိုင်းစိုင်းသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခ။တာချိလိတ်မှာ ရေကြီးနေတဲ.အချိန်မှာ ၀န်ကြီးတို.လူကြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတို.ပြည်သူလူထုကိုလှည်.မကြည်.ပဲနဲ. နောက်ထပ် ပြည်သူလူထုကို ဒုကပေးဖို.ပဲသိတာ လွတ်တော် Channel မှာ အမေးအဖြေကြည်.လိုက်တော.။ဒီ ဦးမော်သာခွေး
က ရေအားလျှပ်စစ်ကို ဆောက်ကိုဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ. သဘောနဲ.ပြန်ဖြေတာလုံးဝ ကိုကျွန်တော်က ကန်.ကွက်တယ် အခုဖြစ်နေတဲ. တာချိလိတ် ရေးဘေး ဒုက သည်ကိုလှည်.တောင်မကြည်.တဲ. ခွေးမျိုး မသာမျိုးဝန်ကြီး ကများ။အားလုံးပဲဆေားရီး တောင်းပန်ပါတယ်ခ ။တောင်းပန်တဲ.ထဲမှာ ၀န်ကြီး ဗမာအစိုးရမပါဘူး )
Detest Bumar govt: and ministry.
If you want to discusses me .Contact here >>> 0066614469510